Shirka Madaxda DFS & DG Suuragal ma tahay in uu dib u dhigo Doorashada 20/21? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Shirka Madaxda DFS & DG Suuragal ma tahay in uu dib u...
Shirka Madaxda DFS & DG Suuragal ma tahay in uu dib u dhigo Doorashada 20/21?
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in marka uu kasoo laabto safar maalmo qaadanaya uu ku marayo Garoowe, Gaalkacyo & Dhuusamareeb kadib uu Muqdisho isugu keenayo Madaxda DFS & DG si ay uga wada xaajoodaan arrimaha Doorashada 20/21.
Waqtiga ku cad heshiiska 1-da October 2020 ee Madaxda Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada intiisa badan lama dhaqangelin, sabab la xiriirta khilaafka siyaasadeed ee hareeray hab maamulka Doorashada & Guddiga hoggaaminaya.
Axmed Madoobe ayaa dhinac isku riixay, kadib markii uu si cad saddex jeer in ka badan uu u sheegay in Guddiga laga sugayo uu kusoo gudbi doono marka Gobolka Gedo gacantiisa lagu soo celiyo, lagana soo qaado Ciidamada Dowladda Federaalka.
Dowladdu Dheg-jalaq uma siin dalabka Madoobe, isaga qudhiisa waa uu iska indha-saabay magacaabista guddiga laga sugayo, taasi waxa ay keentay in howshu ay qabto noqoto, maadaama Hir-Shabeelle, Galmudug & Koofur Galbeed oo lagu biiriyay Guddiyada Somaliland & Xukuumadda aysan qaadin tallaabooyin muuqda.
Labo cishe ayaa laga gudbay waqtiga ugu dambeeya ee loo qorsheeyay 10-ka Cishe ee lagu dooranayo Senatarada Aqalka sare si shaqada la qabtay ay u muuqato, laguna dhiirado Doorashada Golaha Shacabka BFS.
Xukuumadda ayaa sameysay isku day kale, kadib markii ay xareysay Guddiyada ay ka maqan DG Puntland & Jubbaland oo xiriir siyaasadeedkoodu wanaagsan yahay, waxa uu qorshuhu ahaa in ay bilaabaan Doorashada Saddexdaas Dowlad Goboleed balse ma suuragelin.
Haddiiba uu qabsoomo kulanka Madaxda Heer Federaal & heer Dowlad Goboleed waxa uu qaadanayaa waqti dheeraad ah, maadaama isu keenidda shaqsiyaadkaan aysan sahlaneen sida lagu arkay shirarkii horay u qabsoomay oo aan ku furmin waqtiga lagu ballamay.
Waqti xileedka Madaxtooyada Soomaaliya waxaa kaliya ka dhiman 58-Cishe, halka aqoonsiyada Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka ay dhacayaan 30-ka December 2020 waxaana ka harsan 18-Cishe.
73-Cishe ayaa laga joogaa markii lasoo saaray jadwalka Doorashada, keliya waxaa qabsoontay magacaabista Guddiga Farsamada & xalinta Khilaafaadka, balse guddiga guud ee maamulaya Doorashada 20/21 ayaa caqabad ka dhalatay, sabab la xiriirta khilaafka Siyaasadeed.
Haddaba Suuragal ma tahay in Doorashada Golayaasha Aqalka sare & Shacabka BFS lagu qabto maalmaha ka harsan 2020?
Next articleTrump oo waji gabax kala kulmay Maxkamadda sare ee Mareykanka